သူမ Live အ၀တ်အစားအသစ်တွေနဲ့ ရှုတင်အ၀တ်အစား တွေအကုန်လှူဒါန်းမှာဖြစ်ကြောင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာမျှဝေလာတဲ့ မေကဗျာ – Cele Top Stars
သူမ Live အ၀တ်အစားအသစ်တွေနဲ့ ရှုတင်အ၀တ်အစား တွေအကုန်လှူဒါန်းမှာဖြစ်ကြောင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာမျှဝေလာတဲ့ မေကဗျာ
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး မေကဗျာကတော့ ဇာတ်ကားတွေမြောက်များစွာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို နှင်းဆီအငြိမ့်အဖွဲ့ရဲ့ ပင်တိုင်မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ရှိအချိန်အထိလည်း မေကဗျာက ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးရင်း အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ လျှောက်လှမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ် ။
လတ်တလောမှာတော့ မေကဗျာက သူမရဲ့ အဝတ်အစားတွေရှင်းပီး ချင်းပြည် ကအမြဲလှူနေကြဖြစ်ပြီး သူမနဲ့နီးစပ်ရာတွေ ၊ ရှုတင်အဝတ်အစားတွေနဲ့ Live အဝတ်အစားအသစ်တွေရော အကုန်လှူဒါန်းတော့မှာဖြစ်ကြောင်း သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် သူမရောင်းချနေတဲ့ Live Sale မှာ ဒီညဝယ်ယူအားပေးတဲ့သူတိုင်းကိုလည်း အဝတ်အစား လေးတွေလက်ဆောင်ထည့်ပေးဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ ပရိသတ်တွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ် ။
လက်ဆောင်ရရှိသူတွေကလည်း အဆင်ပြေရင်ဝတ်ဖို့နဲ့ မဝတ်ချင်တဲ့သူများလည်း တခြားလိုအပ်တဲ့သူများကိုလက်ဆင့်ကမ်းပီးလှူပေးပါလို့ မေကဗျာက တောင်းဆိုထားပါသေးတယ် ။ ပရိသတ်ကြီးလည်း မေကဗျာရဲ့အလှူလေးမှာ ကံထူးကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်…. ။
ခဈြပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး မကေဗြာကတော့ ဇာတျကားတှမွေောကျမြားစှာ ရိုကျကူးခဲ့တဲ့အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈသလို နှငျးဆီအငွိမျ့အဖှဲ့ရဲ့ ပငျတိုငျမငျးသမီးလေးတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ ။ လကျရှိအခြိနျအထိလညျး မကေဗြာက ဇာတျလမျးတှဲတှေ ဇာတျကားတှေ ရိုကျကူးရငျး အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါမှာ လြှောကျလှမျးနဆေဲဖွဈပါတယျ ။
လတျတလောမှာတော့ မကေဗြာက သူမရဲ့ အဝတျအစားတှရှေငျးပီး ခငျြးပွညျ ကအမွဲလှူနကွေဖွဈပွီး သူမနဲ့နီးစပျရာတှေ ၊ ရှုတငျအဝတျအစားတှနေဲ့ Live အဝတျအစားအသဈတှရေော အကုနျလှူဒါနျးတော့မှာဖွဈကွောငျး သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားဖျောပွခဲ့ပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ သူမရောငျးခနြတေဲ့ Live Sale မှာ ဒီညဝယျယူအားပေးတဲ့သူတိုငျးကိုလညျး အဝတျအစား လေးတှလေကျဆောငျထညျ့ပေးဦးမှာဖွဈတယျလို့ ပရိသတျတှကေိုအသိပေးခဲ့ပါတယျ ။
လကျဆောငျရရှိသူတှကေလညျး အဆငျပွရေငျဝတျဖို့နဲ့ မဝတျခငျြတဲ့သူမြားလညျး တခွားလိုအပျတဲ့သူမြားကိုလကျဆငျ့ကမျးပီးလှူပေးပါလို့ မကေဗြာက တောငျးဆိုထားပါသေးတယျ ။ ပရိသတျကွီးလညျး မကေဗြာရဲ့အလှူလေးမှာ ကံထူးကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးပါတယျနျော…. ။
မိသားစုအတွက် မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့အပြင် ဘာသာရေးအသိဥာဏ်တွေပေးတဲ့ သူမ ဖေဖေအတွက် အမွန်မြတ်ဆုံးမွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလာတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်